Apple inosimudzira iyo nyowani App Store munzvimbo dzayo nyowani | IPhone nhau
Apple inosimudzira iyo nyowani App Store munzvimbo dzayo nyowani
Tatova pakati pedu iyo itsva iOS 11, iyo nyowani yekushandisa sisitimu yemagetsi kubva kuApple. iOS 11 yaunza akawanda maficha maficha, mamwe anoonekwa kupfuura mamwe, asi chokwadi ndechekuti neyese nyowani iOS yekuvandudza tinowana maficha nemaPhones edu kana iPads. Asi pasina kupokana, iOS 11 inounza kwatiri kuvandudzwa kweApp Store, imwe yembiru dzeiyo ecosystem iyo ichangobva kuvandudzwa zvizere.
Kune vanhu vazhinji avo, kunyangwe vaine iPhone, havazive mashandisiro eApp Store, kana zvirinani ivo havasi vanopokana kupinda kuti vatarise maapplication matsva kana matsva. apuro vanozviziva uye achangoburitsa matsva mavara ekusimudzira iyi App Store. A App Store inozoshanda se "magazini" kana blog, kwatichaona nhau uye maonero evapepeti kubva Cupertino. Mushure mekusvetuka tinokuratidza idzi nzvimbo nyowani dzekugamuchira iyo App Store ...
Sezvauri kuona mune yekutanga nzvimbo, Apple inosimbisa iwo mamiriro eiyo chikamu chitsva «Nhasi» kubva kuApp Store, chikamu chitsva uko zuva rega rega tichaona nhau kubva kuApp Store, tutorials, nyaya dzekusimudzira, nhau dzisingaperi dzinonakidza idzo pasina mubvunzo dzinoita kuti titore nguva yakati rebei muApp Store. Zvese zvakarongeka mu makadhi akasununguka atinogona kurasa zvinoenderana nekuti zvinoita kunge zvinonakidza kwatiri kana kwete.
Uye kwete izvozvo chete, Apple yakaburitsa mavhidhiyo enhau dzayo dzichangoburwa, mamwe acho aunogona kuona kubvira pakaburitswa iOS 11. Nenzira, kubva pakatangwa iOS 11 chikamu chenhau ichi kugadzirisa zuva nezuva, chirongwa chakakura chinotiunzira ruzivo rwekutanga-ruoko. Hongu zvirokwazvo, iwe unofanirwa kuona kuti yakawanda sei zvemukati inotsigirwa, kureva kuti, kana ivo vanogadzira vachibhadhara kuti vawane nhau dzavo muchikamu chino ... Chinhu chine musoro ndechekuti kwete, saka tinenge tiine zvemhando yepamusoro, asi pakupedzisira hatifanirwe kukanganwa kuti raizove bhizinesi Apple ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Apple inosimudzira iyo nyowani App Store munzvimbo dzayo nyowani
MuApp Store nyowani runyorwa rwekuda rwanyangarika, handiti? ...
Zvinoita sekudaro, ini handiwaniwo sarudzo iyoyo futi.
Kukundikana kunosimbiswa neApple pachayo neiyo huru yeWi-Fi kubatana muApple Watch Series 3 LTE
Iyo yakawanda kugadzirwa kweiyo iPhone X haina kutanga